Factory detector fiainana - Mpanamboatra detector fiainana China, mpamatsy
YSR Explosion-proof multi-mode detector fiainana radara
Fampidirana Det-life detector proof-proof multi-mode dia famonjen'ny vonjy taitra telo habe mifototra amin'ny feo, matetika, herinaratra, magnetisma, onja ary haitao hafa amin'ny iray, amin'ny fampiasana ny feo, ny detection microwave, ny fampidirana elektromagnetika, ny famoahana horonantsary ary ny fitsipika hafa. Rafitra fikarohana sy famonjena. Ny detector fiainana radar marobe fomba mivaingana dia misy detector telescopic video tsy misy fipoahana, detector fiainana radara mipoaka, ...
YSR Radar mpamantatra ny fiainana
Ny YSR Radar Life Locator dia mampiasa teknolojia radar ultra wideband (UWB) hanatsarana ny mety ho voavonjy aorian'ny fianjeran'ireo rafitra noho ny toetr'andro, afo na fanafihana mahatsiravina, horohoro, tondra-drano, horohoron-tany na loza voajanahary hafa. Ny mpikaroka aina dia mety tsara hamonjy ain'olona, ​​mahita ireo traboina amin'ny fahatsapana na dia ireo fihetsika miaina fotsifotsy aza. Maherin'ny 25m ny sangan'ny asa. Ny mpikaroka fiainana YSR Radar dia voaporofo fa fitaovana mahomby amin'ny fitiliana ireo famantarana ny fiainana toy ny fifohana rivotra sy ...
V9 Explosion-proof wireless audio sy video detector fiainana
Famaritana ny vokatra Ny mpamantatra ny fiainam-peo sy ny horonantsary no vokatra voalohany amin'ny teknolojia audio sy video vaovao hikarohana ny toerana misy ireo tafita velona. Ny mpitsikilo ny fiainana an-tsary sy horonan-tsary dia ny maso sy ny sofin'ny ekipa mpamonjy voina ao amin'ny triatra amin'ny sisan-javatra rava mba hanampiana azy ireo hahita ny sisa velona. Fantatra amin'ny fahombiazany sy ny fahamarinany. Amin'ny alàlan'ny fametahana ny fakan-tsary amin'ny fanokafana kely fotsiny, ny mpamonjy voina dia afaka mamaritra ny toerana misy ireo tafavoaka velona rehefa manombana tsara ny ...
V5 Audio sy detector fiainana fiainana
V5, dia ampiasaina mba hahitana ny fiainana ambanin'ny rava. Nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny National Supervisor Equipment Quality Supervision and Inspection Center. Mpandrika horonantsary V5 dia ahafahan'ny mpamonjy voina mahita ireo olona voafandrika nalevina tao ambanin'ny korontam-bato, ary afaka mifandray amin'izy ireo。Manana fakan-tsary miodina sy fakantsary infrared io ary azo ampiasaina ihany koa na dia amin'ny tontolo maizina aza. V5 Video Life Detector dia eken'ny ekipa mpamonjy voina manerana izao tontolo izao。 Afaka manome resaka sy horonan-tsary mazava izany. Ary ny sary sy ...
Topimaso Izy io dia ampiasaina amin'ny fikarohana mpiasa ao amin'ny toerana misy ny loza toy ny firodanan'ny tranobe, fampiasana ilay mpamory feo malemy an'ny mpamantatra sy ny rafitry ny fifandraisana amin'ny feo mba hamaritana ny toerana sy ny toetoetran'ireo olona voafandrika ireo, ary ny fanomezana ireo mpamonjy voina ireo vaovao momba ireo niharam-boina tao ambanin'ny fahasimbana amin'ny alàlan'ny signal audio sy ny fametrahana fifandraisana amin'ny feo. Fampiharana Ady amin'ny afo, famonjena ny horohoron-tany, raharaha an-dranomasina, famonjena lalina, rafitra fiarovana sivily Product Features Detect and ...